ရခိုင်ပြည်နယ်မှာ မနှစ်ကအခုလိုအချိန် အပစ်အခတ်ရပ်စဲရေးကြားဝင်ကူပေးခဲ့တဲ့ ဂျပန်နိုင်ငံ ငြိမ်းချမ်းရေးအထူးကိုယ်စားလှယ် Mr Yohei Sasakawa အနေနဲ့ ဗိုလ်ချုပ်မူးကြီးမင်းအောင်လှိုင်နဲ့ အခုမကြာခင်တွေ့မှာကနေ ဘာတွေမျှော်လင့်နိုင်ပါလဲ။
အခုလို စစ်ကောင်စီခေါင်းဆောင်နဲ့တွေ့တာအပြင် ရခိုင်ပြည်နယ်ကိုလည်းသွားပြီး၊ ရန်ကုန်မှာလည်း SNLD ရှမ်းတိုင်းရင်းသားများဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်အပါအဝင် နိုင်ငံရေးပါတီ ခေါင်းဆောင်တွေနဲ့ Mr Sasakawa တွေ့ဖို့ရှိတာမှာ ဘာတွေထူးခြားနိုင်ပါလဲ။
ဒီအကြောင်း မြန်မာဆိုင်ရာ ဂျပန်သံအမတ်ကြီး Ichiro Marurama နဲ့၊ ANP ရခိုင်အမျိုးသားပါတီနဲ့ SNLD ရှမ်း ပါတီခေါင်းဆောင်တွေကို ကိုဝင်းမင်းက မေးထားပါတယ်။
ကိုဝင်းမင်း ။. ။ ဂျပန်သံအမတ်ကြီး မာရိုယားမား ကို မနေ့ညကမေးရာမှာ မစ္စတာ ဆာဆာကာဝါ ရောက်ရှိလာခဲ့ပုံကို
ဂျပန်သံအမတ်ကြီး ။. ။ သူကို မနေ့က လေဆိပ်မှာသွားကြိုတယ်။ ဒါပေမယ့်သူခရီးစဉ်ဘယ်လိုရှိလဲဆိုတာကို သူကိုယ်တိုင် စီစဉ်ထားတာဆိုတော့ ကျနော်တို့သံရုံးက စီစဉ်တာမဟုတ်ပါဘူးခင်ဗျ။
ကိုဝင်းမင်း ။ ။ ကျနော်တို့ကြားတာကတော့ မနက်ဖန်မှာ နေပြည်တော်ကို လေယာဉ်နဲ့ သွား ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီး မင်းအောင်လှိုင်နဲ့ တွေ့မယ်လို့ကြားထားပါတယ်။
ဂျပန်သံအမတ်ကြီး ။. ။ (ရယ်သံဖြင့်) ကျနော်တို့ မငြင်းပါဘူး။
ကိုဝင်းမင်း ။. ။ သံအမတ်ကြီးခင်ဗျာ။ ဒီခရီးစဉ် ကနေ ဘယ်လိုမျှော်လင့်နိုင်မလဲ။
ဂျပန်သံအမတ်ကြီး ။. ။ ဒီခရီးစဉ်ရလဒ်ဘာဖြစ်နိုင်မလဲဆိုတာ ပြောလို့မရဘူး။ ကျနော်တို့စောင့်ကြည့်မှာပဲ။ တခုပြောနိုင်တာက မစ္စတာ ဆာဆာကာဝါ ဆိုတာက မြန်မာနိုင်ငံအပေါ်မှာ တကယ်ကို သံယောဇဉ်ရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်ပါတယ်။ ပြီးတော့ မြန်မာနိုင်ငံရေးအရှုပ်အထွေးကို သူနားလည်မှုရှိပါတယ်။ ဒါကြောင့် သူခရီးစဉ်ကနေတဆင့် ဂျပန် မြန်မာဆက်ဆံမှုက ပိုပြီးတော့ တိုးတက်မှုကို ကျနော်တို့ မျှော်လင့်နေပါတယ်။
ကိုဝင်းမင်း ။. ။ ဆက်လက်ပြီး မနှစ်က ဆာဆာဝါက ရခိုင်ပြည်လာခဲ့တုံးက ANP ပါတီ နိုင်ငံရေးမူဝါဒ ဦးဆောင်အဖွဲ့ဝင် ဦးထွန်းအောင်ကျော် ကလည်း
ဦးထွန်းအောင်ကျော်။. ။ သူရခိုင်ပြည်နယ်လာပြီးတော့ ကျောက်တော်မြို့နယ် နဲ့ ဘူးသီးတောင်မြို့နယ် သွားပြီးတော့ စစ်ဘေးရှောင်စခန်းက ရခိုင်ပြည်သူတွေနဲ့ ကိုယ်တိုင်ကိုယ်တိုင်ကြသွားတွေ့ဆုံပါတယ်။ ပြီးတော့ ရခိုင်တပ်တော်နဲ့လည်း တွေ့ဆုံဆွေးနွေးခဲ့တယ်။ နောက် တပ်မတော်ခေါင်းဆောင်ဖြစ်တဲ့ ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီး မင်းအောင်လှိုင် နဲ့လည်း တွေ့ပြီးတော့ AA တပ်တော်ရဲ့ သဘောထားကြေညာချက်တွေနဲ့ တပ်မတော်ရဲ့သဘောထားကြေညာချက်တွေကို တူညီတဲ့ စိတ်ဆန္ဒတွေထွက်ပေါ်လာအောင် ကြိုးပန်းဆောင်ရွက်နိုင်ခဲ့တဲ့ ပုဂ္ဂိုလ်ံကြီးတယောက်ဖြစ်ပါတယ်။ အဲဒီတော့ အခုမမျှော်လင့်ပဲနဲ့ ရခိုင်ပြည်နယ်မှာ AA တပ်တော်နဲ့ မြန်မာတပ်မတော်နဲ့ ထိတွေ့မှုတွေဖြစ်ပေါ်တယ်ဆိုတာလည်း ကျနော်တို့သိနေရပါတယ်။ အခုလိုအချိန်မှာ မစ္စတာ ဆာဆာဝါကာ အနေနဲ့ စွမ်းဆောင်နိုင်တဲ့ ၂ဖက်ကို ညှိနှိုင်းပေးနိုင်တဲ့ အရည်ချင်းရှိတဲ့ ဂျပန်နိုင်ငံရဲ့ ဖောင်ဒေးရှင်း ဥက္ကဌအနေနဲ့ မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ အကြပ်တည်းဖြစ်နေချိန်မှာ လာရောက်တာကို ကျနော်တို့အနေနဲ့ကတော့ အလွန်တရာကို ဝမ်းသာကြိုဆိုတဲ့အနေရှိပါတယ်ခင်ဗျ။
ကိုဝင်းမင်း ။. ။ ဒါပေမယ့် လက်ရှိအခြေအနေကြောင့် အများကြီးတော့ မမျှော်လင့်ဘူးလို့ ANP ပါတီအထွေထွေအတွင်းရေးမှူး ဦးခိုင်ပြည်စိုး က ဆိုပါတယ်။
ဦးခိုင်ပြည်စိုး ။. ။ ခရီးစဉ်ရှိတယ်လို့တော့ကြားတယ်။ ဒါပေမယ့် တရားဝင်ပြောတာတော့ ဘာမှမရှိသေးဘူး။ ဟိုတုံးကအခြေအနေမဟုတ်သေးဘူးပေါ့ဗျာ။ ဒီနေ့အခြေအနေအရကတော့ မျှော်လင့်ချက်သိပ်မရှိဘူးဗျ။ အပစ်အခတ်ရပ်စဲထားတာတခုပဲရှိတယ်။ တကယ်ကို ဆွေးနွေးသဘောတူညီချက်တွေ၇စေချင်တာပေါ့ဗျာ။ မြန်မာနိုင်ငံရေးဟာ ရခိုင်ပြည်နယ်တခုတည်းနဲ့ မပြီးဘူးဗျ။ တကယ်ကို နောက်ဆုတ်သွားပြီး။ အဖတ်ဆယ်လို့မရတဲ့အနေအထား ဒီလိုအခြေအနေမျိုးကနေ ပုံမှန်အနေအထားရောက်ဖို့အတွက် နိုင်ငံတကာအသံတွေကို နားထောင်၊ လက်ရှိမြန်မာခေါင်းဆောင်ပိုင်းတွေ စဉ်းစားပြီးတော့ တည်ငြိမ်အေးချမ်းမှုကို ဘယ်လိုရောက်မလဲဆိုတာ လုပ်သင့်တယ်။
ကိုဝင်းမင်း ။. ။ မြောက်ဦးမြို့နယ် လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်ဟောင်း ဦးဦးလှစော ကလည်း
ဦးဦးလှစော ။. ။ အရင်တုံးကတော့ ANP နဲ့တွေ့တယ်။ နောက်တော့ လွှတ်တော်ဥက္ကဌအပါအဝင်ပေါ့လေ။ အခုတော့ လွှတ်တော်လည်းမရှိတော့ဘူး။ နိုင်ငံရေးပါတီအခန်းဏ္ဍကလည်း အရင်ကလို နိုးနိုးကြားကြားမရှိတဲ့အခါကြတော့ သူအစီအစဉ်လည်း မတွေးတတ်ဘူး။ ကျနော်တို့အနေအထားကတော့ ရခိုင်မှာ အခုအနေအထားကို ဆက်လက်ထိန်းသိမ်းပြီးတော့ သူအရင်က ပေးထားတဲ့ ကတိအတိုင်း စစ်ဘေးရှောင်ကိစ္စတွေကို လုပ်ပေးနိုင်ရင်တော့ ကောင်းတာပေါ့။
ကိုဝင်းမင်း ။. ။ အခုလ ၁၆ရက်နေ့မှာ တွေ့ဖို့ချိန်းထားတဲ့ SNLD ပါတီရဲ့ အထွေထွေအတွင်းရေးမှူး ဦးစိုင်းလိတ် ကလည်း
ဦးစိုင်းလိတ် ။. ။ ထူးခြားမှုဆိုတာကလည်း သူဖက်က သယ်ဆောင်လာမယ့် အခင်အကြင်း အပေါ်မှုတည်ပါလိမ့်မယ်။ ကျနော်တို့ဖက်ကတော့ တည်ငြိမ်အေးချမ်းတဲ့အနေအထားတခုကို အရင်ဖန်တီးပြီးတော့မှ စစ်ကောင်စီနဲ့ အခု PPST အကြားမှာကော ၊ နောက် FNCC ပေါ်နော်။ အဲဒီအဖွဲ့တွေကြားမှာကော ထပ်မံပြီးမှ တိုးချဲ့ပြီးတော့ ညှိနှိုင်းပေးမယ်ဆိုရင်တော့ တည်ငြိမ်အေးချမ်းမှု ဒီထက်မကရနိုင်မယ်ပေါ့နော်။ စစ်ကောင်စီဖက်က ကြိုးစားနေတဲ့ ရွေးကောက်ပွဲဆိုင်ရာ ကိစ္စတွေ အဲဒါတွေကို အာရုံထားတာထက်ကို နိုင်ငံရဲ့ တည်ငြိ်မ်အေးချမ်းမှုကို နားထောင်သင့်တယ်။ လူထုရဲ့သဘောထားကို နားထောင်မှ လူထုအပေါ်မှာ ဥပဒေမယ့်အလုပ်တွေ ရပ်တန့်က ရပ်ဖို့လိုတယ်ဆိုတာ သတင်းစကားပါးလိုတယ်။ အဲဒီအတွက်ကို မစ္စတာ ဆာဆာကာဝါ သတင်းသယ်ဆောင်သွားနိုင်မယ်ဆိုရင်တော့ တစုံတရာ ထူးခြားမှုတွေရှိလာနိုင်တယ်။
ကိုဝင်းမင်း ။. ။ တကယ်တော့ အခု မစ္စတာ ဆာဆာကာဝါ ရဲ့ ခရီးစဉ်က ပြီးခဲ့တဲ့အပတ်ကပဲ အမေရိကန် ဝါရင့် သံတမန်ဟောင်း Bill Richardson ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီး မင်းအောင်လှိုင် နဲ့ဆက်တွေ့အပြီးမှာ ဆက်ဖြစ်လာတာပါခင်ဗျာ။
Sasakawa ခရီးစဉျက ဘာတှမြှေျောလငျ့နိုငျသလဲ
ရခိုငျပွညျနယျမှာ မနှဈကအခုလိုအခြိနျ အပဈအခတျရပျစဲရေးကွားဝငျကူပေးခဲ့တဲ့ ဂပြနျနိုငျငံ ငွိမျးခမျြးရေးအထူးကိုယျစားလှယျ Mr Yohei Sasakawa အနနေဲ့ ဗိုလျခြုပျမူးကွီးမငျးအောငျလှိုငျနဲ့ အခုမကွာခငျတှမှေ့ာကနေ ဘာတှမြှေျောလငျ့နိုငျပါလဲ။
အခုလို စဈကောငျစီခေါငျးဆောငျနဲ့တှတေ့ာအပွငျ ရခိုငျပွညျနယျကိုလညျးသှားပွီး၊ ရနျကုနျမှာလညျး SNLD ရှမျးတိုငျးရငျးသားမြားဒီမိုကရစေီအဖှဲ့ခြုပျအပါအဝငျ နိုငျငံရေးပါတီ ခေါငျးဆောငျတှနေဲ့ Mr Sasakawa တှဖေို့ရှိတာမှာ ဘာတှထေူးခွားနိုငျပါလဲ။
ဒီအကွောငျး မွနျမာဆိုငျရာ ဂပြနျသံအမတျကွီး Ichiro Marurama နဲ့၊ ANP ရခိုငျအမြိုးသားပါတီနဲ့ SNLD ရှမျး ပါတီခေါငျးဆောငျတှကေို ကိုဝငျးမငျးက မေးထားပါတယျ။
ကိုဝငျးမငျး ။.။ ဂပြနျသံအမတျကွီး မာရိုယားမား ကို မနညေ့ကမေးရာမှာ မစ်စတာ ဆာဆာကာဝါ ရောကျရှိလာခဲ့ပုံကို
ဂပြနျသံအမတျကွီး ။. ။ သူကို မနကေ့ လဆေိပျမှာသှားကွိုတယျ။ ဒါပမေယျ့သူခရီးစဉျဘယျလိုရှိလဲဆိုတာကို သူကိုယျတိုငျ စီစဉျထားတာဆိုတော့ ကနြျောတို့သံရုံးက စီစဉျတာမဟုတျပါဘူးခငျဗြ။
ကိုဝငျးမငျး ။။ ကနြျောတို့ကွားတာကတော့ မနကျဖနျမှာ နပွေညျတျောကို လယောဉျနဲ့ သှား ဗိုလျခြုပျမှူးကွီး မငျးအောငျလှိုငျနဲ့ တှမေ့ယျလို့ကွားထားပါတယျ။
ဂပြနျသံအမတျကွီး ။. ။ (ရယျသံဖွငျ့) ကနြျောတို့ မငွငျးပါဘူး။
ကိုဝငျးမငျး ။.။ သံအမတျကွီးခငျဗြာ။ ဒီခရီးစဉျ ကနေ ဘယျလိုမြှျောလငျ့နိုငျမလဲ။
ဂပြနျသံအမတျကွီး ။. ။ ဒီခရီးစဉျရလဒျဘာဖွဈနိုငျမလဲဆိုတာ ပွောလို့မရဘူး။ ကနြျောတို့စောငျ့ကွညျ့မှာပဲ။ တခုပွောနိုငျတာက မစ်စတာ ဆာဆာကာဝါ ဆိုတာက မွနျမာနိုငျငံအပျေါမှာ တကယျကို သံယောဇဉျရှိတဲ့ပုဂ်ဂိုလျဖွဈပါတယျ။ ပွီးတော့ မွနျမာနိုငျငံရေးအရှုပျအထှေးကို သူနားလညျမှုရှိပါတယျ။ ဒါကွောငျ့ သူခရီးစဉျကနတေဆငျ့ ဂပြနျ မွနျမာဆကျဆံမှုက ပိုပွီးတော့ တိုးတကျမှုကို ကနြျောတို့ မြှျောလငျ့နပေါတယျ။
ကိုဝငျးမငျး ။. ။ ဆကျလကျပွီး မနှဈက ဆာဆာဝါက ရခိုငျပွညျလာခဲ့တုံးက ANP ပါတီ နိုငျငံရေးမူဝါဒ ဦးဆောငျအဖှဲ့ဝငျ ဦးထှနျးအောငျကြျော ကလညျး
ဦးထှနျးအောငျကြျော။.။ သူရခိုငျပွညျနယျလာပွီးတော့ ကြောကျတျောမွို့နယျ နဲ့ ဘူးသီးတောငျမွို့နယျ သှားပွီးတော့ စဈဘေးရှောငျစခနျးက ရခိုငျပွညျသူတှနေဲ့ ကိုယျတိုငျကိုယျတိုငျကွသှားတှဆေုံ့ပါတယျ။ ပွီးတော့ ရခိုငျတပျတျောနဲ့လညျး တှဆေုံ့ဆှေးနှေးခဲ့တယျ။ နောကျ တပျမတျောခေါငျးဆောငျဖွဈတဲ့ ဗိုလျခြုပျမှူးကွီး မငျးအောငျလှိုငျ နဲ့လညျး တှပွေီ့းတော့ AA တပျတျောရဲ့ သဘောထားကွညောခကျြတှနေဲ့ တပျမတျောရဲ့သဘောထားကွညောခကျြတှကေို တူညီတဲ့ စိတျဆန်ဒတှထှေကျပျေါလာအောငျ ကွိုးပနျးဆောငျရှကျနိုငျခဲ့တဲ့ ပုဂ်ဂိုလျံကွီးတယောကျဖွဈပါတယျ။ အဲဒီတော့ အခုမမြှျောလငျ့ပဲနဲ့ ရခိုငျပွညျနယျမှာ AA တပျတျောနဲ့ မွနျမာတပျမတျောနဲ့ ထိတှမှေု့တှဖွေဈပျေါတယျဆိုတာလညျး ကနြျောတို့သိနရေပါတယျ။ အခုလိုအခြိနျမှာ မစ်စတာ ဆာဆာဝါကာ အနနေဲ့ စှမျးဆောငျနိုငျတဲ့ ၂ဖကျကို ညှိနှိုငျးပေးနိုငျတဲ့ အရညျခငျြးရှိတဲ့ ဂပြနျနိုငျငံရဲ့ ဖောငျဒေးရှငျး ဥက်ကဌအနနေဲ့ မွနျမာနိုငျငံရဲ့ အကွပျတညျးဖွဈနခြေိနျမှာ လာရောကျတာကို ကနြျောတို့အနနေဲ့ကတော့ အလှနျတရာကို ဝမျးသာကွိုဆိုတဲ့အနရှေိပါတယျခငျဗြ။
ကိုဝငျးမငျး ။. ။ ဒါပမေယျ့ လကျရှိအခွအေနကွေောငျ့ အမြားကွီးတော့ မမြှျောလငျ့ဘူးလို့ ANP ပါတီအထှထှေအေတှငျးရေးမှူး ဦးခိုငျပွညျစိုး က ဆိုပါတယျ။
ဦးခိုငျပွညျစိုး ။.။ ခရီးစဉျရှိတယျလို့တော့ကွားတယျ။ ဒါပမေယျ့ တရားဝငျပွောတာတော့ ဘာမှမရှိသေးဘူး။ ဟိုတုံးကအခွအေနမေဟုတျသေးဘူးပေါ့ဗြာ။ ဒီနအေ့ခွအေနအေရကတော့ မြှျောလငျ့ခကျြသိပျမရှိဘူးဗြ။ အပဈအခတျရပျစဲထားတာတခုပဲရှိတယျ။ တကယျကို ဆှေးနှေးသဘောတူညီခကျြတှေ၇စခေငျြတာပေါ့ဗြာ။ မွနျမာနိုငျငံရေးဟာ ရခိုငျပွညျနယျတခုတညျးနဲ့ မပွီးဘူးဗြ။ တကယျကို နောကျဆုတျသှားပွီး။ အဖတျဆယျလို့မရတဲ့အနအေထား ဒီလိုအခွအေနမြေိုးကနေ ပုံမှနျအနအေထားရောကျဖို့အတှကျ နိုငျငံတကာအသံတှကေို နားထောငျ၊ လကျရှိမွနျမာခေါငျးဆောငျပိုငျးတှေ စဉျးစားပွီးတော့ တညျငွိမျအေးခမျြးမှုကို ဘယျလိုရောကျမလဲဆိုတာ လုပျသငျ့တယျ။
ကိုဝငျးမငျး ။.။ မွောကျဦးမွို့နယျ လှတျတျောကိုယျစားလှယျဟောငျး ဦးဦးလှစော ကလညျး
ဦးဦးလှစော ။.။ အရငျတုံးကတော့ ANP နဲ့တှတေ့ယျ။ နောကျတော့ လှတျတျောဥက်ကဌအပါအဝငျပေါ့လေ။ အခုတော့ လှတျတျောလညျးမရှိတော့ဘူး။ နိုငျငံရေးပါတီအခနျးဏ်ဍကလညျး အရငျကလို နိုးနိုးကွားကွားမရှိတဲ့အခါကွတော့ သူအစီအစဉျလညျး မတှေးတတျဘူး။ ကနြျောတို့အနအေထားကတော့ ရခိုငျမှာ အခုအနအေထားကို ဆကျလကျထိနျးသိမျးပွီးတော့ သူအရငျက ပေးထားတဲ့ ကတိအတိုငျး စဈဘေးရှောငျကိစ်စတှကေို လုပျပေးနိုငျရငျတော့ ကောငျးတာပေါ့။
ကိုဝငျးမငျး ။.။ အခုလ ၁၆ရကျနမှေ့ာ တှဖေို့ခြိနျးထားတဲ့ SNLD ပါတီရဲ့ အထှထှေအေတှငျးရေးမှူး ဦးစိုငျးလိတျ ကလညျး
ဦးစိုငျးလိတျ ။.။ ထူးခွားမှုဆိုတာကလညျး သူဖကျက သယျဆောငျလာမယျ့ အခငျအကွငျး အပျေါမှုတညျပါလိမျ့မယျ။ ကနြျောတို့ဖကျကတော့ တညျငွိမျအေးခမျြးတဲ့အနအေထားတခုကို အရငျဖနျတီးပွီးတော့မှ စဈကောငျစီနဲ့ အခု PPST အကွားမှာကော ၊ နောကျ FNCC ပျေါနျော။ အဲဒီအဖှဲ့တှကွေားမှာကော ထပျမံပွီးမှ တိုးခြဲ့ပွီးတော့ ညှိနှိုငျးပေးမယျဆိုရငျတော့ တညျငွိမျအေးခမျြးမှု ဒီထကျမကရနိုငျမယျပေါ့နျော။ စဈကောငျစီဖကျက ကွိုးစားနတေဲ့ ရှေးကောကျပှဲဆိုငျရာ ကိစ်စတှေ အဲဒါတှကေို အာရုံထားတာထကျကို နိုငျငံရဲ့ တညျငွိမျအေးခမျြးမှုကို နားထောငျသငျ့တယျ။ လူထုရဲ့သဘောထားကို နားထောငျမှ လူထုအပျေါမှာ ဥပဒမေယျ့အလုပျတှေ ရပျတနျ့က ရပျဖို့လိုတယျဆိုတာ သတငျးစကားပါးလိုတယျ။ အဲဒီအတှကျကို မစ်စတာ ဆာဆာကာဝါ သတငျးသယျဆောငျသှားနိုငျမယျဆိုရငျတော့ တစုံတရာ ထူးခွားမှုတှရှေိလာနိုငျတယျ။
ကိုဝငျးမငျး ။.။ တကယျတော့ အခု မစ်စတာ ဆာဆာကာဝါ ရဲ့ ခရီးစဉျက ပွီးခဲ့တဲ့အပတျကပဲ အမရေိကနျ ဝါရငျ့ သံတမနျဟောငျး Bill Richardson ဗိုလျခြုပျမှူးကွီး မငျးအောငျလှိုငျ နဲ့ဆကျတှအေ့ပွီးမှာ ဆကျဖွဈလာတာပါခငျဗြာ။